Monthly Bonus For August 2020 ? Double Crown ? Better Skin Coffee Soap Scrub အတုံး 7,392 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Moon Enzali Kyi Myint (FB-000045) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ? Congratulation ? ပါ Moon Enzali Kyi Myint August လအတွင်း Better Skin Coffee Soap Scrub အတုံး 7,392 ကျော် ရောင်းချပေးပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် Double Crown အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ?ငွေသား (26) သိန်း (5) သောင်းကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ❤️Super Agent ❤️တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Monthly Bonus ကို Garnier Essence ဘူး 2400 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Moon Enzali Kyi Myint (FB000045) တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Moon Enzali Kyi Myint !!! June လအတွင်း Garnier Essence ဘူး 2400 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ? Super Silver Agent ? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ????ငွေသား (11) သိန်း (5) သောင်းကျပ်တိတိနှင့် ???? Garnier Essence ဘူး (100) ဘူး နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်
Monthly Bonus ကိုဆပ်ပြာတုံး 4800 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကေတာ့ Moon Enzali Kyi Myint (FB000045) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Moon Enzali Kyi Myint !!! June လအတွင်း ဆပ်ပြာတုံး 4800 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ? Super Gold Agent ? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ????ငွေသား (17) သိန်း (5) သောင်းကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Monthly Bonus ကို New Skiin Supplement ဘူး 400 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Moon Enzali Kyi Myint (FB000045) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Moon Enzali Kyi Myint !!! June လအတွင်း New Skiin Supplement ဘူး 400 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ? Super Bronze Agent ? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ????ငွေသား (6) သိန်းကျပ်တိတိနှင့် ???? New Skiin Supplement (20) ဘူး နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Monthly Bonus ကို Nano ဘူး 1000 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Moon Enzali Kyi Myint (FB000045) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Moon Enzali Kyi Myint !!! June လအတွင်း ဘူး 1000 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ? Gold Agent ? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ???ငွေသား (9)သိန်း (4)သောင်းကျပ်တိတိပါ နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။